सरकार पहिले कि पार्टी एकिकरण ? के भन्छन अोली (AP-1 ले लिएक अन्तरर्वाता) - Muldhar Post
सरकार पहिले कि पार्टी एकिकरण ? के भन्छन अोली (AP-1 ले लिएक अन्तरर्वाता)
पत्रपत्रिकाबाट २०७४, २६ मंसिर मंगलवार 536 पटक हेरिएको
जनतालाई धन्यवाद भन्छु। एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको तालमेलप्रति विश्वास गरेर जनताले जिम्मेवारी सुम्पिएका छन्। त्यसलाई अत्यन्त शालीनतासाथ लिन्छौं। लोकतन्त्रको रक्षा, स्वाभिमान, राष्ट्रिय एकताको अभिवृद्धि, शान्ति एवं समृद्धिको प्रयासमा अगाडि बढ्ने हो ढिलो गरी होइन त्यसका लागि म सबैलाई आग्रह गर्छु। कतिले चुनाव जितियो, कतिले हारियो तर देश निर्माणका लागि निर्वाचनमा हार्दैमा कोही रिटायर्ड हुने त होइन नि ! जित्दा र हार्दा भूमिकामा केही फरक पर्ने मात्र हो। तर, हामी सबैले देश निर्माण गर्नु छ। यसका लागि सबैलाई अग्रसर हुन म आग्रह गर्दछु। भिडियो हेर्नको लागि यो तलको लिङ्कमा जानुहोला । अन्नपूर्ण पोष्टबाट